Izincwadi ezinhle kakhulu ze-horror, ukuhlanganiswa kwezindaba ezimnyama kakhulu | Izincwadi Zamanje
Isilinganiso sika-Edgar Allan Poe.
Ukukhuluma ngezincwadi ezinhle kakhulu ezethusayo kungaba yinto ethandekayo, ikakhulukazi ngenxa yomthwalo omkhulu wenkampani ozithwalayo. Kodwa-ke, kuzobhekwa ubulungiswa ngokususelwa emsebenzini wama-greats. Manje, ukwethuka kuyindaba elandelwayo eqanjiwe eyaduma kakhulu ngemuva kokuthandana. Lesi simo singenxa yesimo esingesihle sezincwadi ezingokoqobo phakathi nekhulu leshumi nesishiyagalolunye. Yebo, bekuyizikhathi zenguquko yezimboni, kanye nohlobo lwe-capitalism engalawulwa. Impendulo yobuciko ilethe ukuzalwa kabusha kwephupho, ukuzithoba nokusondelana.
Ngaphakathi kwalesi sikhathi samanje, kwavela amapeni okusebenza okungenakonakala njengoMary Shelley, u-Edgar Allan Poe noma uBram Stoker, phakathi kwabanye abaningi. Laba babhali abathathu ikakhulukazi bakhethe ukungena ezindaweni ezimnyama komphefumulo. Ukukhetha kwakhe kwaholela ekwakhiweni kwemihlaba emnyama kunazo zonke ezake zacatshangwa ngumqondo womuntu. Kulezi zikhala ezimnyama ezinye izinhlamvu ezihlonishwa kakhulu kuze kube manje zivele.
1 Iziphi izimfanelo izincwadi ezinhle kakhulu ezesabekayo ezinazo?
1.1 "Ukusebenza" kwamandla angaphezu kwawemvelo
1.2 Umkhathi omnyama
1.3 Izihloko ezihlobene nemvelo yomuntu
2 Izincwadi ezinhle zakudala ezesabekayo
2.1 UFrankenstein noma i-Modern Prometheus (1818), kaMary Shelley
2.2 IBlack Cat (1843), ebhalwe ngu-Edgar Allan Poe
2.3 UDracula (1897), nguBram Stoker
3 Kumele-ubone izincwadi ezethusayo ezivela engxenyeni yesibili yekhulu lama-XNUMX
3.1 Ukuxoxisana noVampire (1976), ngu-Anne Rice
3.2 Usizi (1987), nguStephen King
Iziphi izimfanelo izincwadi ezinhle kakhulu ezesabekayo ezinazo?
Njengoba nje kwathiwa, ukwenza uhlu “lwezincwadi ezihamba phambili ze…”, kukodwa nje, kungumbuzo ozithobayo futhi ozigabadelayo. Kodwa-ke, iziqu ezihlonishwa kakhulu ngumphakathi nabagxeki ngaphakathi kohlobo olwesabekayo zinezici ezijwayelekile ezibenze baba yimisebenzi yokungafi. Phakathi kwalabo:
"Ukusebenza" kwamandla angaphezu kwawemvelo
Intambo elandisayo nezinsizakusebenza ezisetshenziswa ngababhali abakhulu abesabekayo kuveza ushintsho lokubona kumfundi. Okungukuthi, izindaba ezingaphezulu kwemvelo - yize ziqagela - zigcina "zikholisa" umfundi ukuba neqiniso kwazo ngokusebenzisa izindaba eziqanjiwe zesayensi.
Isethingi seGothic noma iVictorian siyinto esemqoka yokuvusa imizwa nokuxhuma umbukeli. Ngubani ovame ukuphendulwa ufakazi wangaphambili futhi, nokuhlanganyela kwemicimbi kulandiswe. Ngenkathi usezindabeni ezifana UsizinguStephen King, isimo asisiGothic noma uVictoria ngayinye se, umlingiswa oyinhloko (umbhali) uyazisebenzisa lezi zimo emibhalweni yakhe.
Izihloko ezihlobene nemvelo yomuntu
Abalingiswa abasezincwadini ezinhle kakhulu ezethusayo - noma ngabe babukeka besabeka kangakanani ekuqaleni - bahlala benezisusa ezivela kubantu. Ngakho-ke, umfundi angazizwa ezwelana nabaphikisi. Esinye sezibonelo eziphawuleka kakhulu yisilo sikaFrankenstein, esikhomba inhlonipho ngempilo futhi sibonisa izingqinamba ezifana nesizungu noma isimilo sesayensi.
Ngokufanayo, in UDracula UBram Stoker (umbhali) ubheka izindaba eziphathelene nezocansi, iqhaza labesifazane emphakathini wamaVictoria, kanye nomlando. Ngemuva kwalokho, abalingiswa baphathwa ngendlela lapho khona kwabo kungeke kwenzeke "empilweni yangempela." Lapho kukhona ukufaneleka kwabalobi abakhulu balolu hlobo: okwenza abafundi bazizwe ukuthi okungaphezu kwemvelo "kuphakathi kwethu."
Izincwadi ezinhle zakudala ezesabekayo
UFrankenstein noma i-Prometheus yanamuhla (1818), nguMary Shelley
Ungathenga incwadi lapha: Frankenstein
Ngawo-1880s, ukubhala kwe UMary Shelley (1797 - 1851) mayelana noFrankenstein wabuzwa imibuzo. Njengoba kwakuvame ukwenzeka ngaphambi kwekhulu lama-1792, umyeni wakhe uPercy B. Shelley (1822-XNUMX) wasondela ekutholeni udumo. Yize okwamanje kungangabazeki ngakho, kusengumbono ongafanele wowesifazane owayengumbhali osezingeni eliphezulu.
Kahle unikele ngengxenye enkulu yamaculo akhe ekuhleleni nasekuncomeni umsebenzi womyeni wakhe, ngaphandle kokuphothula eminye imisebenzi ephawulekayo. Phakathi kwabo, UValperga (1823) futhi Indoda yokugcina (1828). Vele, incwadi yakhe ebaluleke kakhulu kwakuyiyona eyadlala "isidalwa" (uFrankenstein) ngoba ibhekwa - akukho okunye futhi akukho okuncane - isihloko sokuqala sesayensi eqanjiwe kuwo wonke umlando.
UVíctor Frankenstein ungusosayensi osemncane olangazelela ulwazi, okuvelela kwakhe ngokweqile kumholela ekubeni adlulele kunoma imiphi imikhawulo yokuziphatha neyokuziphatha. Ngokwezinga lokuthi uzimisele ngokwakha impilo emzimbeni ofile. Ngale njongo, hlanganisa izingxenye ezahlukahlukene zezidumbu ezahlukahlukene ukudala i-monster esabekayo engamamitha angu-2,44 ukuphakama evuswe emandleni kagesi.
Impumelelo kasosayensi ekugcineni iba isiqalekiso sakhe. Kulungile Ukudalwa kwakhe kunqatshwa yibo bonke abantu abathola endleleni yakhe. Ngenxa yalokho, isidalwa esikhulu siqala ukubulala wonke umuntu osondelene noVictor. Ngumngane kuphela ongathulisa lesi silo, kepha usosayensi uyenqaba futhi aqede noma yikuphi ukuphela ngokuthula.
Ikati elimnyama (1843), ngu-Edgar Allan Poe
Ungathenga incwadi lapha: Ayikho imikhiqizo etholakele.
Umxoxi uqala ngokuthi akasile. Yize ezizwa esondele ekufeni ngalo lolo suku ngoba udinga ukududuza umphefumulo wakhe ngezenzo ezesabekayo nezonakalisayo ezenzekile. Ukuyichaza, usezoxoxa lezi zehlakalo ngendlela engahlelekile neze. Iqala ngokuzichaza njengengane enhle nenomusa ezilwaneni, ikakhulukazi ikati elimnyama okuthiwa uPluto.
Ngokusobala, i-feline ngabe iyimoto yenhlangano yamademoni. Ngakho-ke, i-protagonist iba "nesifo" esimenza aziphathe ngendlela engafanele nangolaka (ushaya umkakhe, akhiphe insingo iso lekati ngaphandle, adakwe) ... Ekugcineni, le ndoda ilahlekelwa yikho konke futhi lapho umkayo esethatha elinye ikati elimnyama, umlingiswa ophambili "uyagula" futhi.
Dracula (1897), nguBram Stoker
Ungathenga incwadi lapha: Dracula
Kubalulekile ukusho ukuthi umbhali ubesuselwe ezinganekwaneni nasezinganekwaneni ezithandwayo ezihlobene nezidakamizwa ezazivela e-Eastern Europe. Umlandi we-epistolary wencwadi ngumthengisi uJonathan Harker, obanjwe yi-Count hypnotic Dracula ngenkathi senza ibhizinisi esifundeni iTransylvania.
Kamuva, i-earl ifika eLondon ngenhloso yokuqeda ukuthandwa kwegazi nokwandisa izidleke zakhe. Lapho, uLucy Westenra ohloniphekile uwele ekunganakwa okungajwayelekile futhi unamamaki amabili wokuchezuka okuncane entanyeni yakhe. Ngalesi sizathu, udokotela wakhe (uSeward) ucela ukwesekwa nguProfesa Van Helsing odumile, onguchwepheshe ezimweni ezingavamile. Kusukela kulowo mzuzu kuqhubeke, umzabalazo wegazi udalulwa phakathi kokuhle nokubi okungahlola ukuzimisela kwabo bonke labo abathintekayo.
Kumele-ubone izincwadi ezethusayo ezivela engxenyeni yesibili yekhulu lama-XNUMX
Ukuxoxisana ne-vampire (1976), ngu-Anne Rice
Ungathenga incwadi lapha: Ukuxoxisana ne-vampire
Lesi sihloko singesokuqala ochungechungeni I-Vampire Diaries ngu-Ann Rice. Ilandisa ngokuguqulwa kwensizwa enebhadi elivela eNew Orleans yaba isigwebo sobumnyama obungapheli. Lokhu kungafi kuhambisana nokuzisola kukamlingiswa oyinhloko ngenxa yakho konke ukufa asekwenzile kanye nothando aluzwa ngomunye wabahlukunyeziwe.
Usizi (1987), nguStephen King
Ungathenga incwadi lapha: Usizi
Ngu "master of terror" kuphela ongadala inganekwane enjalo esontekile nengalawuleki kangako. I-protagonist ngumbhali owehlelwe yingozi futhi unakekelwa ngumhlengikazi onesihluku ngokuziphatha okungajwayelekile (ohlala egumbini elikude). Kepha empeleni, ungumqondo we-macabre, ngakho-ke, umbhali kufanele abaleke alwele impilo yakhe noma imilenze yakhe yephukile.
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Izinhlobo » Ukwesaba » Izincwadi ezinhle kakhulu ze-horror